Hehy · Oktobra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Hehy · Oktobra, 2010
Tantara mikasika ny Hehy tamin'ny Oktobra, 2010
Arabia Saodita: Génie any amin'ny fitsaràna
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Oktobra 2010
"Teo ambany herin'ny génie (fanahy araka ny famaritana arabo) aho", izany no fialàn-tsiny farany indrindra ho an'ny kolikoly ara-panjakana any Arabie Saoudite. Araka ny gazety Saodiana Okaz [Ar], voampanga ho nanao kolikoly ny mpitsara iray tao Al Madina, nandray tsolotra sy naka mihoatra izay tokony ho izy.
Filipina: Horonantsarin-dihy malaza
Azia Atsinanana 24 Oktobra 2010
Gadra mandihy. Mpiasa an-trano mandihy. Tompon'andraikitra fiaramanidina mandihy. Dia izao indray mpitaky hetra mandihy. Jereo indray ireo horonantsarin-dihy malaza avy any Filipina.
Frantsa: Mitantara angano momba ny fananana vady maro any amin'ireo fianakaviana mpifindra monina ny gazetiboky
Afrika Mainty 20 Oktobra 2010
Le Point, gazetibokim-baovao Frantsay mpivoaka isan-kerinandro, no lasibatry ny “mpitolona” iray karazany vaovao izay manohitra ny endrika omena ireo mponina any amin'ny fiarahamonin'ny mpifindramonina. Niteraka adihevitra be teo amin'ny haino aman-jery i Abdel tamin'ny nisandohany ho renim-pianakaviana ao amina fianakaviana marovady.
Koweit: Aleo ho lò ny voatabia!
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 06 Oktobra 2010
Tomatoes are now eight times more expensive in Kuwait than they were a month ago - and netizens are not taking the change in prices in stride. They cannot find an explanation to why the cost of a box of tomatoes jumped from half a dinar ($1.70) to KD4 ($14) in just a few days.
Kaoety: Mihinàna, Mijere dia Mivavàha
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 04 Oktobra 2010
Orinasa goavana mpamokatra sarimihetsika ao Kaoety no nanambara fa mikasa ny hametraka 10 mn ho fakàna aina amin'ny ora fiasany efa voafaritra isanandro mba hanomezana fotoana ireo mpino marobe hanaovan'izy ireny ny maghreb izay fotoam-bavaky ry zareo. Nifangaro be ihany ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Twitter naterak'ilay fanambarana